San Htun's Diary: ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၉
အလုပ်မြန်မြန်ရပါစေဝေးး အဲလိုရင်ပူရတဲ့ဒုက္ခကဒီအပျိူကြီး မြန်မြန်လွတ်ပါစေး))
ဟုတ်ပ စန်းထွန်းရယ်...စာဖတ်ပြီးလို့ ပုံကြည့်မှပဲ တကယ့်ပန်ဒါအစစ်ကြီးတွေကို တွေ့တော့တာပဲ...ပေါက်ဖော်ကြီးတွေက လက်ပေါက်ကပ်ပေမယ့် စန်းထွန်းနဲ့တော့ အိုခေသားပဲ...
ခမာပြည်ကလည်း ရွှေပြည်နဲ့သိပ်မကွာပါလားကွယ်...သူမသာ ကိုယ်အသုဘထင်ရဲ့...
စန်းထွန်းရဲ့ ပို့အခန်းဆက်ပြီးမှပဲ အကြံပေးရတော့မှာပဲ “ ရက်ကွက် ” လို့ မပေါင်းဘဲ စာလုံးပေါင်းအမှန်အတိုင်း ” ရပ်ကွက် ” လို့ ပေါင်းရင် ပိုအဆင်ပြေမလားလို့ ...
ဟုတ်ပါ့ ဆရာဟန်ရေ..ရပ်ကွက်ကမှ အမှန်..သင်ပေးတာ ကျေးဇူး..ပြင်လိုက်ပြီ..
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ရပ်ကွက်လေးပါလား.. စန်းထွန်းရေ..း))
ခန္ဓာကိုယ် အားကိုးနဲ့ အနိုင်ကျင့် မခံရအောင် ကြုံရာစားပြီး အမှီသာလိုက်တော့ သူငယ်ချင်းရေ... စတာနော်... အလုပ်မြန်မြန် ရဖို့ အတွက်လဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် သူငယ်ချင်း... ရပ်ကွက်ထဲက အကြောင်းလေးက သဘောကျစရာလေးပါ...
ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ ရပ်ကွက်လေးပါပဲ
Mon Mon Yoko said...
လစာများများ နဲ.အလုပ်ကောင်းကောင်း မြန်မြန်ရပါစေ။
အခက်ခဲတွေကြားထဲက အမှတ်ရနေစရာ ရပ်ကွက်လေးပါလား စန်းထွန်းရေ... :) အလုပ်မြန်မြန် ရပါစေလို့..
အလုပ်ရရင် ဘလော်ဂါတွေကို လည်း မုန့်ကျွေးနော်
အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေပါစေ အစ်မကြီးစန်းထွန်း ၊ မြန်မာနဲ. တူတဲ. နိုင်ငံသူလေးတွေကို ကြည်.ရင်း စိတ်ဝင်စားတာတွေ လေ.လာသွားပါသည်။
အလုပ်ရရင် ဘလော့ဂါတွေကို မုန့်ကျွေးဖို့ မမေ့နဲ့အုံးနော် စန်းထွန်း :))
အလုပ်တွေ အစဉ်ပြေပါစေ အမရေ...။။
ခမာစာကလဲ ဗမာစာလိုပဲ ယပင့်တွေ ယရစ်တွေ